Tsy heno fotoana ela… : hiverina an-tsehatra i Mily Clément | NewsMada
Tsy heno fotoana ela… : hiverina an-tsehatra i Mily Clément
“Mandrora mitsilany”, “Banja malalaka”, “Mandifera”, “Tsy apetrakao”, “Ho meva”, sns. Hira nalaza sy nampisongadina an’i Mily Clément, tany amin’ny taona maro nivalona tany ireo. Tsy lefy laza ny hira, saingy efa aman-taonany maro koa no tsy tazana an-tsehatra intsony i Mily Clément. Nisy fotoana niezaka niverina ity mpanakanto anisan’ny nitondra fijery vaovao tamin’ny salegy ity, saingy tsy mbola tafapetraka izany.
Fantatra kosa izao, fa hisy ny fiakarana an-tsehatra hotontosain’i Mily Clément, anio, manomboka amin’ny 9 ora alina, etsy amin’ny Kudeta Anosy. Tetikasan’ny Ivenco, izay efa noketrehina ela izy ity. Nahoana tokoa moa no tsy tokony hiverina an-tsehatra i Mily Clément, kanefa maro ireo mbola miandry azy sy ireo hirany taloha?
Hahazo tombony ireo mpankafy, indrindra fa hodidinina mpanakanto manan-talenta i Mily Clément amin’io fotoana io. Anisan’ireny ry Solofo Bota (vata maroafitsoka –angorodao), Josia (amponga maroanaka), Tojo Rabekoto (gitara beso),Gérard Ratsimiseta (gitara), Kevin, Naly ary Andry Michael (zavamaneno tsofina), Jao, Lizy ary Linah (feo lafika).
Hisy fiovana hanaraka ny vanim-potoana ve ny rindran’ireo hiran’i Mily Clément? Aleo mahita eny an-tsehatra…